कला/मनोरञ्जन Archives -
काठमाडाैँ । भारतीय कलाकार शक्ति कपूरकी छोरीले नेपाली युवकसँग विवाह गर्दैछिन्। बलिउडमा विवाहको सिलसिला जारी रहेकै बेला शक्तिकी छोरी श्रद्धा कपूरले नेपाली मुलका युवक रोहन श्रेष्ठसँग विवाह गर्दैछिन। भारितय मिडियाले जनाए अनुसार अब शक्ति कपुरको घरमा चाडै नै शहनाई बज्नेवाला छ । अर्थात शक्ति कपुरले छोरी श्रद्धालाई ज्वाईक...
रवि लामिछानेले फेरि गरे विवाह, को सँग कहिले गरे?
काठमाडाैँ - सञ्चारकर्मी रवि लामिछानेले फेरि विवाह बन्धनमा बाँधिएका छन्। चलचित्र विकास बोर्डकी अध्यक्ष निकिता पौडेलसँग सोमबार विवाह अदालती प्रकिया मार्फत विवाह गरेका हुन्। उनीहरुले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा गएर कानुनी रुपमा विवाह दर्ता गराएका हुन्। लामिछानेले आफ्नो फेसबुक पेजमा निकितासँगको फोटो राखेर लेखेका छन्, ‘व्यक्...
काठमाडाैँ –नायिका वर्षा राउत र अभिनेता संजोग कोइरालाको लभ यात्राले अन्तिम रुप लिएको छ। लामो समयदेखि चल्दै आएको प्रेम सम्बन्ध अब विवाहमा परिणत हुन लागेको छ। लामो समयदेखि प्रेममा रहेको यो जोडीको विवाह कहिले होला भन्ने प्रश्न पनि बेला–बेलामा चर्चामा आउने आउने र सेलाउने गरेको थियो। वर्षाले प्रेमी सन्जोग कोइरालासँग आगामी फा...
काठमाडौं – पछिल्लो समय बलिउडकीमा तहल्का मचाउन सफल भएकी हट एण्ड सेक्सी अभिनेत्री सन्नी लियोनीले कलिउडमा पनि छलाङ्ग मारेकी छन्। नेपाली चलचित्रमा हट रुपमा उनी प्रस्तुत भएकी छिन्। लन्डनमा छायाँकन गरिएको चलचित्र ‘पासवर्ड’मा उनले नेपाली गीतमा कम्बर मर्काउदै हट रुपमा प्रस्तुत भएकी हुन्। पोर्न स्टारलेसमेत परिचित सन्नीले आइट...
एजेन्सी : स्कटल्याण्डकी एक मोडलको टपलेस फोटोका कारण ब्यूटी क्विनको उपाधि खोसिएको छ । ३५ वर्षे नतालिया पावेलेकले सेप्टेम्बरमा मिसेस स्कटल्याण्ड २०१८ को उपाधि जितेकी थिइन् । तर त्यसको केही घण्टाभित्रै नतालियाले पुरुष म्यागजिन एफएचएम र जुका लागि १० वर्ष अघि गरेको टपलेस फोटो जजहरुले अज्ञात स्रोतमार्फत पाए । फलस्वरुप, नत...
बलिउड अभिनेत्री ईशा गुप्ताले गराइन् ‘हट एण्ड बोल्ड’ फोटोशुट !
काठमाडाैँ । बलिउड अभिनेत्री ईशा गुप्ताले गराइन् 'हट एण्ड बोल्ड’ फोटोशुट गराएकी छन्। ‘हट एण्ड बोल्ड’ फोटोशुटका कारण तहल्का मचाउन सफल अभिनेत्री ईशा गुप्ताको नयाँ तस्बिरले सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइरहेको छ । सन् २००७ मा मिस इन्डिया ईशा गुप्ताले २०१२ मा ‘जन्नत–२’ मा इमरान हाजमीसँग बलिउडमा डेब्यू गरेकी थिइन् ।उनीे पछि...
बलिउड अभिनेत्री करिना कपुर बन्ने भइन् राजस्थानकी राजकुमारी!
काठमाडौं– बलिउड अभिनेत्री करिना कपुर राजस्थानकी राजकुमारी बन्ने पक्का पक्की भएकाे छ।करिना छोराकी आमा भएपनि करिअरमा उत्तिकै समर्पित छिन् । करिना रियलमा नभएर अभिनयकाे क्रममा एक चलचित्रमा राजस्थानकी राजकुमारीकाे रुपमा देखा पर्ने भएकी हुन्। उनको पछिल्लो फिल्म ‘वीरे दि वेडिङ’ बक्स अफिसमा हिट भएको थियो । करिना अब फरक खालक...
नायिका अक्सराको गोप्य तस्वीर लिक भएपछि ब्वाईफ्रेण्डमाथि प्रहरीले लियाे यस्ताे एक्सन!
काठमाडौं- बलिउडकी नायिका कमल हसनकी छोरी अक्सरा हसनकोको गोप्य तस्बिर बाहिरिएपछि उनीसहित उनका परिवार समेत तनावमा परेका छन्। अक्सरा हसनले आफ्नो निजी तस्विर लिक भएपछि मुम्बाई प्रहरीको साइबर सेलमा उजुरी दिएकी छन् । उजुरी प्राप्त भएलगत्तै प्रहरीले पूर्व ब्वाईफ्रेण्ड तनुज विरवानीसँग सोधपुछ गरेको छ । अनुसन्धानकै क्रममा...
अष्ट्रेलियाकी मोडल जेसिकाकाे यस्ता हट चार फाेटाे भइरल भएपछि तहल्का!
काठमाडाैं - अष्ट्रेलियाकी मोडल जेसिका गोमेजकाे विकनी र अर्धनग्नसहितकाे हट फाेटाे इन्टरनेटमा भइरल भएपछि तहल्का नै मच्चिएकाे छ। जेसिका संसारको सबैभन्दा आकर्षक महिलामध्येकी एक नम्बरमा अाउने गरकी छन्। उनले सन् २०१२, २०१३ र २०१४ मा ‘वर्ल्ड मोस्ट डिजाइरेबल वुमन’ को उपाधि हात पारेकी छिन् । अष्ट्रेलियाकी मोडल जेसिका गो...
बलिउडकी नायिका अक्सरा हसनको बाहिरियाे यस्ता गाेप्य तस्बिर!
काठमाडौं । बलिउडकी एक अभिनेत्रीकाे गोप्य तस्बिर बाहिरिएपछि भाइरल भएकाे छ। बलिउडकी नायिका कमल हसनकी छोरी अक्सरा हसनकोको गोप्य तस्बिर बाहिरिएपछि उनीसहित उनका परिवार समेत तनावमा परेका छन्। अक्सराको गोप्य तस्बिर इन्टरनेटमा केही दिन अगाडि भाइरल भएकाे थियाे । बलिउडमा चलचित्र ‘समिताभ’बाट प्रवेश गरेकी अक्सराको यो तस्बिर...